Mashandiro anoita Meseji muIOS 9 | IPhone nhau
Iyo Mail application muIOS 9 haiuyi neakawanda maficha maficha, asi ine akati wandei akakosha ezvekuita senge kugona kudzima maemail ese kamwechete. Icho chimwe chitsva chinonyanya kubatsira, nekuti icho chinotibvumidza isu kugadzirisa mufananidzo watinozotumira kana takagamuchira kuitira kuratidza chimwe chinhu chatinoda kuti vatinonangana navo vatarise. Mangwana iyo inotevera iPhone ichaunzwa uye icharamba iri vhiki pasati yaburitswa iOS 9 pachena, asi hazvikuvadze kuongorora mashandiro email app muIOS 9 kana, kana iwe uri mutsva kuIOS, tsvaga zvese zvatingaite neyekuzvarwa iOS tsamba yekushandisa.
1 Maitiro ekutumira email neemail
2 Maitiro ekubatanidza faira
3 Mashandisiro ekushandisa iOS 9 Dial-up (nyowani)
4 Sevha faira kuICloud Drive (nyowani)
5 Maitiro ekuwedzera bhokisi retsamba
6 Tsamba yemasaini
7 Delete ese mameseji (nyowani)
Maitiro ekutumira email neemail
Kutumira email hakuna chakavanzika uye zvine hungwaru. Chinhu chekutanga chatinofanirwa kuita kubata pane iyo icon Mutsva meseji (ona mufananidzo) uye wozadza muminda:
Mumunda "Zve:" Tichaisa maemail atinoda kutumira iyo email. Tinogona kuisa maemail akawanda sekuda kwedu. Kana isu tatanga kunyora, sekune chero imwe email mutengi, inozotipa isu kero dzinoenderana netsamba dzatinopinda. Kana tichida, tinokwanisa kubata chiratidzo chinowedzera (+) uye nekutsvaga avo vanofambidzana kubva pachinyorwa.
Mumunda «Cc / Cco; Kubva: " Tichaona iyo email kubva kwatinozotumira iyo email. Kana tikabata ipapo, tinogona kuwedzera kero ichatumirwa kopi yetsamba.
En "Bhizinesi:" tichaisa tsananguro pfupi yeemail, semuenzaniso, "mapikicha emanheru." Kudivi rerudyi tichaona bhero rinozoshanda kutizivisa kana iyo email yapindurwa. Tichaimisikidza kuti igamuchire ziviso kunyangwe isu tisina mukana wekutora iyo "Push" tsamba inoshanda.
Maitiro ekubatanidza faira
Kubatanidza faira isu tichafanira chete dzvanya kwesekondi imwe munzvimbo yemutumbi wemeseji, iyo iyo bhawa yaunoona mune yapfuura skrini. Kubva pabhawa iri tinogona:
Chinja fomati yemavara.
Wedzera chinongedzo kubva kuICloud Drive.
Isa pikicha kana vhidhiyo
Mashandisiro ekushandisa iOS 9 Dial-up (nyowani)
Zvemifananidzo iyo yatinobatanidza kana kunamatirwa neemail, isu tinayo Kufona. Markup idiki Imagen mupepeti izvo zvinotibvumidza isu "kumaka" mapikicha kuratidza nzvimbo, kuwedzera, kuwedzera siginecha kana kuwedzera chinyorwa. Zviri nyore kushandisa. Kuti tishandise, tichazongofanira kuisa munwe wedu pamufananidzo wechipiri uye tichaona zvingasarudzwa. Kana isu tichizotumira iyo email, iyo nhema sarudzo bar ichaonekwa uye isu tinofanirwa kutsvaga "Dialing". Kana isu tagamuchira iyo chifananidzo chakanamirwa mune email, isu tichafanirwa kusarudza "Maka uye kupindura".
Kana iwe uri OS X Yosemite vashandisi, kushandisa Dialing zvichave nyore kwauri. Tine:
Akasimudza ruoko: izvi zvichatibvumidza dhonza zvakasununguka. Ruoko rwakasimudzwa rune smart system iyo inogona kuturikira zvatinoda kudhirowa. Kana tikadhonza chimwe chinhu chinoratidzika semuseve, icho chinotipa museve kwatiri kuti tiise pamufananidzo. Izvo zvakafanana zvinoitika nemamwe ese maumbirwo senge masikwere, madenderedzwa kana kunyangwe emabhuru.
Kukudza girazi: ichatibvumidza wedzera chikamu chemifananidzo. Tinogona kuswededza mukati kana kunze nekutsvedza kumusoro kana pasi mukati megirazi rinokudza.
Text: sezvaunogona kufungidzira, inoshanda ku wedzera mameseji.
kambani: Nekuti wedzera siginecha yedu. Kana isu tiine imwe yatogadzirwa muYosemite, tichava nayo pane yedu iPhone, sekureba sekunge isu takabatana neICloud account. Kana zvisiri, tinogona kuwedzera siginecha panguva iyoyo uye tichava nacho mune ramangwana.
Sevha faira kuICloud Drive (nyowani)
Sezvauri kuona mumufananidzo wapfuura, padhuze ne "Markup" (inozove yekumaka kana vhezheni yepamutemo yaburitswa), isu zvakare tine mukana wekuchengetedza chinamato muICloud Drive. Kana isu tikasarudza iyi sarudzo, iCloud Drive ichavhura uye isu tinogona kukuudza iwe mune iyo folda yekuchengetedza iyo yakanamatira faira.
Maitiro ekuwedzera bhokisi retsamba
Kuwedzera bhokisi retsamba kuri nyore. Kune izvi isu tinongofanirwa ku:
Tinya pane Hora.
Ipapo tinobata Bhokisi retsamba idzva.
Isu tinoratidza mune folda ipi yatinoda kuisa bhokisi redu retsamba
Isu tinoratidza kana tichiida muICloud kana mune chero dura. Sezvo ini ndisina imwe, ndakachiisa paICloud.
Masaini echiratidzo haasi matsva kuIOS 9. Chii ehe iwo matsva ndiwo ma icon izvo isu tichaona kana tichigadzira. Kubva pane zvinyorwa zvatinoona muIOS 8 tinoenda kumifananidzo, sezvaungaona mumufananidzo wapfuura. Tine zviito zvitatu zviripo:
Isu tinotsvedza kurudyi kumaka sekuverenga / kusati kwaverengwa. Kana tikaita chiratidzo chidiki, tinogona kubata pa icon, asi zvakanak kuita chiito chakareba sezvo zvichingozviitisa neabhesi.
Tichatsvedza kuruboshwe nechiratidzo chakareba chekudzima tsamba.
Tichasveta kuruboshwe nechiratidzo chidiki kuti tione zvimwe sarudzo. Idzi sarudzo dzinogona kugadziridzwa kubva kuZvirongwa / Email, Nhare, Karenda / Tsamba / Swipe sarudzo.
Delete ese mameseji (nyowani)
Iyi sarudzo nyowani muIOS 9 yeavo vatisingatsanangure kuti vatora nguva yakareba sei kuisa. Kuchenesa meseji dzese, isu tinongofanirwa pombi pane edit uye «Delete zvese». Tinogona zvakare kufambisa meseji kuenda kune imwe folda kana kumaka ese aine chiratidzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Mashandiro anoita Meseji muIOS 9
Kunaka !!! Pakupedzisira !!! Hareruya !! Ndanga ndakamirira iyi sarudzo kwemakore, ndisingakwanise kudzima maemail kamwechete .. Chinhu chakareruka uye chisingagone kuitwa, zvaiita sekunyadzisa kwandiri .. Zvikangoitika, handichazozvirangarira, zvimwe vanoibvisa paminiti yekupedzisira :)
Zvinogona kunge kuti mutumbi weemail haugone kutsvaga, chingotsvaga chidzidzo kana kubata!
Alleged (nyepera) vhidhiyo inosimbisa pink iPhone 6s uye zvimwe zvakatemwa
Phillips anotangisa yakajeka Hue Lightstrip Plus